Home TOROHEVITRA FOTSORATRA TSY MISY MPANJAKA Mpilalao Football English Ny tantaran'ny tantaran'ny tantaran'ny tantaran'ny tantaran'ny tantaram-pahagagana nataon'i Luke Shaw, Plus Untold
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny ravina sisa tavela izay malaza amin'ny anarana; 'Olona enina tapitrisa dolara'. Ny tantaranay momba ny tantaram-pahanginan'i Luke Shaw sy ny zava-misy marina momba ny tantaram-piainana dia mitondra ny fitantarana feno momba ireo zava-nitranga mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'ny fahazazany. Ny analysis dia misy ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana, ny fiainam-pifandraisana ary ny zavatra hafa tsy fantatra momba azy momba ny OFF-Pitch.
Eny, fantatry ny rehetra ny haavony sy ny tongony mahafaty, saingy vitsy no mihevitra ny tantaram-piainan'i Luke Shaw izay mahaliana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, andao hanomboka.
Ny tantaram-pitiavan'i Luke Shaw momba ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Voalohandohan'ny fiainana
Luke Paul Hoare Shaw dia teraka tamin'ny andro faha 12tio ny volana 1995 tany Kingston upon Thames, Royaume-Uni.
Nizara ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany izy James Rodriguez, Brock Lesnar, Malala Yousafzai (nahazo ny loka Nobel fandriampahalemana), Sundar Pichai (CEO of Google), ary Bill Cosby.
Teraka tamin'ny reniny, Joanna Shaw ary rain'i Paul Shaw i Luke. Niroborobo tany Surrey izy, nanatrika ny Sekolin'i Rydens Enterprise tao Hersham.
Ny fitiavany ny Chelsea FC Gianfranco Zola dia nanintona ny fitiavany ny baolina kitra. Little Luke dia nihalehibe an'i Chelsea mpanohana ary nilaza fa tany am-piandohany dia te-hilalao ny klioba Londres izy. Raha ny marina, nanao ezaka ho amin'ny akademia izy nandritra ny valo taona. Shaw dia nilalao tao amin'ny foibe fampandrosoana an'i Chelsea tao Guildford, saingy tsy nomena toerana fianarana.
Na dia teo aza ny fahadisoam-panantenana, dia mbola tena tia be ny baolina kitra i Luke. Nanohy nanohy ny nofinany izy tamin'ny mbola kely. Tao amin'ny 2001, dia niaraka tamin'i Hersham izy, izay nanondro azy ho an'ny Molesey Juniors mba hanangana ny tenany ho an'ny akademian'ny baolina kitra lehibe kokoa. Tao amin'ny 2003 dia nanome antso an'i Southampton izy. Taorian'ny nilalaovana ny klioba nandritra ny taona 11 (2003-2011 ho an'ny akademia), dia nanatevin-daharana an'i Manchester United tao amin'ny 2014 ho ny zatovo mahafinaritra indrindra nividy ny klioba. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Ny tantaram-pitiavan'i Luke Shaw momba ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Relationship Life
Toy ny tamin'ny fotoana nanoratana, dia tsy nanambady i Luke nefa manana fifandraisana amin'ny sakaizany malalany Shelby Billingham. Tena mifankatia ireo mpivady ireo ary faly miara-mifaly aminy.
Luke Shaw sy Girlfriend, Shelby Billingham
Samy nizara ny fomba i Luke sy i Shelby raha vao niala tany Londres ho any Manchester izy. Tamin'izany no nanombohany fifandraisana tamin'ny sipa Anouska Santos. Ny fitiavana dia mitombo avy amin'ny hery ho tanjaka.
Vao haingana, ny mason-tsavily dia nahita tohatra tamin'ny alina Krismasy miantsena miaraka amin'ny namany. Shaw, nanao akanjo mainty miaraka amin'ny satroka feno harona mba hiarovany ny tenany amin'ny toetr'andro ririnina. Samy mikarokaroka ny mijery ny fivarotana firavaka ho an'ny fanomezana alohan'ny andro lehibe.
Luke Shaw dia mandeha amin'ny fividianana firavaka miaraka amin'ny sipany, Anouska Santos.
Saingy rehefa mitsara ny fotoana nandanihan'izy ireo ny ampahany amin'ny fanangonana ny fivarotana ireo fivarotana varotra, dia afaka manomana ny andro manokana ho azy ireo izy ireo amin'ny ho avy tsy ho ela. Ity ambany ity ny Luke Shaw sy ny sipany Anouska Santos amin'ny hetsika dihy United4Unicef.
Luke Shaw sy ny namany, Anouska Santos
Ny tantaram-pitiavan'i Luke Shaw momba ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Teraka i Luke ary nentina nankao amin'ny fianakaviana malaza any Kingston Upon Thames United Kingdom. Efa talohan'ny fampiasana baolina kitra no nialan'ny zanany lahy voalohany.
Izy no zanaka tiany indrindra amin'ireo ray aman-dreniny ary noho izany dia nahazo fitiavana sy fiahiana lehibe avy tamin'ny fianakaviany izy. Ankoatra izany, nomeny ihany koa ny fianakaviany noho ny fahombiazany. Ity ambany ity ny Mr. Paul Shaw, ny vadiny malalany Joanna Shaw (fomba fijery azy) ary ny zanany izay ahitana an'i Luke Shaw.
Lioka Shaw Family
Ny ray sy ny renin'i Lioka dia ray aman-dreny tsara indrindra izay miara-mijoro aminy amin'ny toe-javatra rehetra.
Ny tantaram-pitiavan'i Luke Shaw momba ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Luke Shaw Rahalahy Vs Mourinho
Nolavin'ny rahalahy LUKE SHAW indray mandeha ny fandehanana an-tserasera goavana amin'ny Twitter, izay toa nanararaotra azy Jose Mourinho.
Toa tezitra i Ben Shaw taorian'ny nandraisan'ny Special One ny rahalahiny niala ny ekipa izay nahafatesan'ny ekipany 4 - 0 ho an'i Chelsea.
Talohan'ny nanombohany nanararaotra Jose Mourinho, I Bén dia niseho ho naniry ny fikambanana tsara, tamin'ny filazana hoe: "Tsara vintana amin'izao fotoana izao."
Na dia izany aza, nivadika haingana ny zava-drehetra rehefa nambara ny ekipa ary navotsotra i Shaw, ary i Ben dia nanoratra ity manaraka ity tao amin'ny media sosialy.
Ny fahasosoran'i Benny amin'i Jose Mourinho
Efa nahita ny tenany teo am-pelatanany foana i Luke Shaw Jose Mourinho ny fipoahana izay nitarika azy ho fongana ny ekipany. Jose Matetika no nanakiana ampahibemaso an'i Shaw ny solontenan'ireo ekipa amerikana izay tsy maintsy nampionona ilay tanora mpiaro.
Ny fahasosoran'i Jose Mourinho miaraka amin'i Luke Shaw
Ny tantaram-pitiavan'i Luke Shaw momba ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Leg Break Video
Luke Shaw indray dia nijaly noho ny fanaintainana tsy hay tohaina tamin'ny fihoaram-peo mahatsiravina tamin'ny lalao Champions League manohitra ny PSV.
Latsaky ny 15 minitra teo amin'ny lalao, navotsotra tany amin'ny toerana fanamelohana fanoherana ny havitr'akona havia raha toa i Hector Moreno, mpiaro ny PSV, dia nitebiteby taminy.
Ny tantaram-pitiavan'i Luke Shaw momba ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -toetra
Danny Rose dia kansera ary manana ny toetoetrany amin'ny toetrany.
Ny herin-tsain'i Luke Shaw: Tena miavaka, feno hatsaram-panahy, feno fihetseham-po, mientanentana ary mandresy lahatra.
Ny fahalemen'i Luke Shaw: Moody, pessimista, mampiahiahy, manipulative ary tsy azo antoka.
Inona no tian'i Luke Shaw: Hira, fialam-boly any an-trano, miala sasatra na ao anaty rano, manampy ny olon-tiany, sakafo tsara amin'ny namana.
Inona no tsy tian'i Luke Shaw: Ireo vahiny, izay tsikerain'i Neny ary mampiseho ny fiainan'ny tena manokana.
Ny tantaram-pitiavan'i Luke Shaw momba ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Antony mahatonga ny anarana
Ny masoandro Indray mandeha nitantara izy ireo fa manana mpilalao United no nanonona an'i Luke Shaw 'Lehilahy 6 tapitrisa dolara'. Izany dia noho izy nanana finoana mitovy amin'ny astronaut Steve Austin izay naratra mafy rehefa nianjera ny habakany.
Lioka koa dia nizaka ny horohoron'ny fihokoana nandritra ny faharesen'ny Ligy Championship an'ny PSV Eindhoven.
Ny tantaram-pitiavan'i Luke Shaw momba ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Ataovy izay heverinao fa zava-misy
Luke Shaw dia naneho ny fampitahàna amin'ny an'i Manchester United havaozina havia Patrice Evra voalohany indrindra dia mifototra amin'ny hoe iza no nahatonga ny ankamaroan'ny fanafihana manohitra ny lalao. Eny, nahazo laza malaza i Evra ho toy ny fanafihana amin'ny baolina an-tsokosoko, saingy ny tsanga-tsoratra milaza fa tsara kokoa i Shaw.
Ny zava-misy dia nanambara i Luke Shaw fa manafika kokoa noho i Evra
Araka ny antontan'isa, ilay tanora dia namorona ny 141 ho an'ireo mpiara-mianatra aminy ao amin'ny 35 Premier League - mihoatra noho i Evra no nitantana - ary nanana ny fahombiazan'ny 56% rehefa niezaka ny handroboka ny baolina.
Ny tantaram-pitiavan'i Luke Shaw momba ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Paul Scholes tsy faly
Mbola tsy nahagaga an'i Shaw hatramin'izao i Paul Scholes. Ny mpilalao matihanina Manchester United Manchester dia maharitra hitifitra noho ny vidin'ny sarany ny kliobany teo aloha dia nandoa ny mpiaro azy ary nilaza fa tokony ho nanao sonia ny mpikomy ny Red Devils. Scholes, izay nanao ny endrik'i 718 ho an'i United tamin'ny glittering 20 taona, dia vao haingana no nilazana fa ny £ 30 + tapitrisa nalaina tao amin'ny Shaw dia "Adaladala".
Paul Scholes tsy nankasitraka an'i Luke Shaw
Amin'ny teniny ..."Ho an'ny ilam-pahefana havaozina £ 34 tapitrisa dia maneho ny tsy fahombiazan'ny lalao. Ho an'izany ny vola, Te-handroso am-piadanana aho izay handresy ny tanjona 30 mandritra ny vanim-potoana "
Ny tantaram-pitiavan'i Luke Shaw momba ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Ny mpanohitra ratsy indrindra
Luke Shaw dia nanohitra ny sasany tamin'ireo mpanohitra tena nahatsiravina. Ny tiako Eden Hazard, Daniel Sturridge ary Wilfried Zaha, Luis Suarez ny kianja rehetra.
Fa iza no mpanohitra tena matahotra azy? Tsia, tsy Suarez, fantatra amin'ny hoe manaikitra mafy ny mpiaro. Izany dia Victor Moses. Rehefa nanontaniana izy vao haingana Twitter Q & A izay natahotra indrindra ny mpanohitra azy, namaly ilay kintana, angamba mahagaga:
"Tena henjana aho fa handeha Victor Moses, ho an'ny heriny sy ny heriny. Hitako fa tena sarotra ilay izy. "
Ny tantaram-pitiavan'i Luke Shaw momba ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Ankizivavikely
Na dia ny mpiaro fadiran-tserasera fahaefatra indrindra indrindra aza amin'izao fotoana izao, dia ny karaman'ny £ 100,000-isan-kerinandro, ny mpilalao sy mpankafy dia tsy tokony hanantena hahita an'i Luke Shaw mitondra fiara mirehitra.
Tsy noho izy tsy mahavidy vola iray - ny fidiram-bolany tany United dia nahatonga azy ho anisan'ny tanora tia tena indrindra eran-tany.
Tamin'izany fotoana izany, dia satria mbola tsy nandalo ny fisedrana izy. Fotoan-tsarotra tahaka izao no tsaroanao fa tena tanora i Shaw tamin'izany fotoana izany.
Izy dia 18 raha vao niditra an'i United. Talohan'ny nidirany dia mbola niaraka tamin'ny ray aman-dreniny izy. Matetika ny ray aman-dreniny dia mitondra azy amin'ny lamasinina sy milalao lalao. Na dia talohan'ny nandehanany tany amin'ny World Cup 2014 aza izy. Shaw dia naharitra nandritra ny herinandro naharitra sy naharitra kokoa taorian'ny fiatombohan'ny fiadiana ny amboara eran-tany 2014. Izany dia tamin'ny ezaka mba hahazoana ny fahazoan-dalana farany. Ny fiovan'ny tovovavy manankarena be dia be dia be koa.
Misaotra ny famakiana ny tantaram-pitiavan'i Danny Rose momba ny tantaram-pitiavana sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!.
James Ward-Prowse ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Dusan Tadic tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa
Victor Lindelof tantaran'ny tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Ny tantaran'ny tantaram-pahaleovantenan'i Carlos Tevez Plus momba ny tantaram-piainana tsy fantatra
Ny tantaran'i Alan Shearer Childhood Plus dia navoaka momba ny tantaram-piainany